Tab & Xeelad: Sida Video loogu daabaco Youtube - AqoonKaal.com
Wednesday, November 13, 2019 6:05 pm
Casharkan waxaan ku baran doonaa sida Youtube loga samaysto Account, isla markaasna loogu daabaco Video.
Waxa kale oo Video labaad ee hoose uu ku saabsan yahay tirakoob la xiriira aaladda website-yada lagu daalacdo ee Browser-ka iyo sida loogu baahan yahay in la cusboonaysiiyo browserada.
Youtube Sida looguduubo Video
Macluumaad ku saabsan Browserada
Halkan ka daawo sida loo duubo shaashadda computerka
Waxaan kaaga mahad celin casharka browser-rada, waxaanna u malayn in aad tahay qofkii ugu horreeyey oo Soomaali ku hadla oo browsers-ka ka hadla.
Waxaan rajayn in uu dad badan indhaha u furo, ayna gartaan meesha adduun marayo.
Waa la yaab marka 2011-2006 = 5 ay la mid noqoto in Soomaalidu ay dambeeyaan shan sano oo ku dhan 🙁
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay walaalkeenna qaaliga ah. Runtii wax badan ayaa lagaa baran karaa. Allah ha kuu ziyaadiyo adigna cilmiga iyo fahanka. Yaa Soomaali badan adiga oo kale ka dhiga. Maxaa mid leh wax baan bartay oo inuu wax dumiyo mooyee aan waxba dadka u qaban. Allah kuwaas kaama dhigo walaalo./your brother from Sweden.
ASC Walaal mahadsanid jawaabtaada.
farhan nur says:
asc walal waxan wata talefanka android [ideos] youtube kuma shaqeynayo lkn markan soo gadayey wuu ku shaqeynayey lkn hada maya ee walal hadad aqoon u leedahay mida kale wax ma download gareynayo wixi jwb ah emailkan iigu soo dir *****
asc walaal hubi in uu telefoonka buuxsamey, waayo telefoonka waxa uu leeyahay mug uu qaadi karo (memory) oo haddii ay buuxsanto aan wax kale lagu xafidid karayn,
asc walal waxan kaga mahad celinaya jwbtada wanag saned walal su,al kale ayan qaba oo markasta waxa ii soo dhaca fariin, fariintas oo ka imaneysa shirkadda micrasoft waxeyna ku saabsan tahay Emailkeyga anigu waxan isticmala hotmail micrasoft ayaduna waxey i dhahda pleas u wareeg outlook.com walal sideen ugu wareega ama ugu dhiga outlook
mahadsanid walal dhib ha ii arkin waxan rabaa inan kaa faideysto iga ma ahan xijjo plz tnx
ASC walaal aqoon korosigu wax dhib ah ma leh, waadna mahadsan tahay. Aad ayey u sahlan tahaya in aad outloook u guurtid. Waxaad booqataa websiteka Outlook.com kaddib Login adigoo adeegsanaya emailkaagii hotmailka una qoraya emailkaaga @ hotmail, iyo furahaagii hotmailka. Markaas si degdeg ah ayaa dhammaan emailkaagii hotmailku waxa uu u soo guurayaa outlook, sidaas ayaad outlook ku leedahay.
macallin ilaahay khaayr hakugu abaalmariyo sida fiican ee aad noogu soo tabinaaysid aqoonta ee aad markasta nagula garabtaagatahay maadsanid macalina ilaahay khaayr hakaaga abaalmariyo
Jawaab u qor farhan